ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi I-Fabian Delph yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba epheleleyo yebhola yeGlaus eyaziwayo ngegama; "Fabs". Ibali lethu leFabian Delph Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ibali lethu leFabian Delph Childhood linomdla, ukuba akuqhelekanga - yindoda yenkwenkwe ethobekileyo evela kwimvelaphi yentsapho enzima. Nangona wayelahliwe nguyise, uDelph wabusiswa nge talente engavamile. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
I-Fabian Delph yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UFabian Delph wazalelwa 21 ngomhla kaNovemba 1989 kunina, uDonna Delph kunye noyise ongaziwayo eBradford, eUnited Kingdom. Abazali bakaFabian Delph babenokwahlukana xa beyingane.
Njengoko wayekade etshela umshicileli, uMfokazi uFabian washiywe nguyise xa wayeseyingane.
Ekuqaleni ebomini bakhe, uyise kaFabian wayexelwe ukuba waphuma xa wayeselula kakhulu ukuba akhumbule. Oku kwenza uFabian, umama wakhe kunye nabantakwabo bahambele kwiindawo ezinqatshelwe ngaphandle kwidolophu yaseBradford.
Impembelelo Yomzali WaseDalph Ukuhlukana: Nabani na umntu oye waphila ngekhefu lomzali uyazi kakuhle kakhulu intlungu engqondweni engayenza. Oku, ngokungathandabuzeki, kwaba nemiphumo engqondweni yengqondo kuFabian kunye nabantakwabo. Isiphumo sabonakala ngokucacileyo kwi-buildup kwi-career yakhe.
I-Fabian Delph yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts -Umsebenzi woMama
Unina kaFabian, uDonna Delph nguye owamnceda unyana wakhe ukufumanisa umsebenzi wakhe ekuqaleni. Kuba uFabian, ukungafihlekanga kwaphela xa bekuhlala kukho ibhola ekhatyweni.
Umama kaFabian uDonna unelungelo lokuthenga ngetyala njengokuba wamkhupha waza waqinisekisa ukuba wayephelelwe yimpembelelo embi. Ngelo xesha, iNtsapho kaFabian Delph yayihlala kwindawo enzima yaseBradford apho abantu banokulahleka neempembelelo ezimbi abazifumanayo.
Ukukhula, uFabian wayenqume ngokuzimisela ukwenza ukuba amaphupha akhe ebhola azaliseke kwaye iinjongo zakhe zokuba ngumdlali webhola lebhola yayingeyona nje idlulayo. Njengomfana osemncinci, enye yephupha elikhulu likaFabian kwakuwukuthenga umama wakhe endlwini xa eba sisityebi.
I-Fabian Delph yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts -Ukusuka eGrass ukuya kuBrace
Unina kaFabian Delph wayehlwempuzekileyo kwaye akakwazi ukufumana i-academy kunye nokugcinwa kwemali kwonyana wakhe nentsapho yakhe. Wayengumcebisi ofumana ipennies (i-£ 278 ngeentsuku ezimbini) ezingenakuhamba naphi na.
Ngelishwa, uDonna Delph waba nexhala ngokuphumelela kwendodana yakhe kwaye kwafuneka enze ubuqhetseba emsebenzini wakhe. Uxake i-£ 45,052 ecinga ukuba ingozi efunekayo ukuyithatha. Ngokudabukisayo, kwabuyiselwa kwaye uDonna wabanjwa. Umama wamathathu wanikwa isigwebo sejele sase12. Kubalulekile ukwazi ukuba xa umama ongumnye uDonna wenza ubuqhetseba bakhe, wayesele evivinywe ngamacala afanayo. Wagqiba kwiNkundla yaseBradford Courwn ngoJuni 2007.
Emva kokukhululwa kwakhe, uDonna wabuyela ekusebenzeni njengomcebisi. Kamva, ukuzimisela komsebenzi kaFabian Delph ekugqibeleni kwaholela ekuphumeleleni. Imvelaphi yentsapho yeFabian Delph yathatha indawo entsha njengoko ibhola liqala ukuhlawula. UFabian ekugqibeleni wabuyisela ukholo lwakhe lomama ngokumthengela indlu ngokufezekisa iphupha lakhe lomntwana.
I-Fabian Delph yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ngaphandle kokungathandabuzeki, Ibhola liyimithi yegolide, indawo apho uFabian Delph ethola khona induduzo kude naye ukuxhatshazwa komzali wakhe. Kwakhona wafumana induduzo xa wayedibana nothando lobomi bakhe, uNatalie ku-2013.
U-Natalie wazalwa ngo-Matshi 31, 1990 (oneminyaka emncinci kunoFabian), e-Manchester City, eNgilani. Ungumfazi oshishino ophumelelayo, usomashishini kunye nomtyalomali omkhulu. Ulwalamano lwabo lwalukhula ukusuka kwimeko engcono yomhlobo ekuthandeni okwenene okubangelwa umtshato. Kubalulekile ukukwazisa ukuba abathandi bobabini bavumelana ukutshata emkhosini wabucala ngaloo nyaka badibana nawo.
UFabian namhlanje ngumntu otshatayo. Kwiminyaka emibini emva komtshato wabo, lo mbini wamkela umntwana wabo wokuqala, inkwenkwana. UFabian uyaziwa ngabalandeli njengobawo onakekelayo.
Emva kokuzalwa kwendodana yabo elandelwa kukuzalwa kwentombi yakhe uAleya e-2015. UNatalie wazala umntwana wesithathu ngomhla we-30th kaJuni, i-2018 iintsuku ezimbini emva kwe-2018 umdlalo weqela lokugqibela weqela le-XNUMX kwiBelgium eKaliningrad. Oku kwenza uFabian abuyele eNgilani esuka eRashiya ngexesha leNdebe yeHlabathi ukuze abone ukuzalwa komntwana wakhe. Wabuyela eRashiya emva kokunikezelwa ngempumelelo.
I-Fabian Delph yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts -Iinkcukacha zobomi bomntu
Ngo-23 Disemba 2008, uDelph wabanjwa ngamapolisa ngenxa yolwaphulo-mthetho.
Wahlawulwa ukusela ukuqhuba in Rothwell, Leeds, ngelixa wayeqhuba ngokungenangqondo ekhaya lakhe nabahlobo bakhe abane. UDelph waziva ehlazeka ngenxa yobugebengu bakhe. Wagweba inkundla yeNkundla kaMantshi eLeeds ukuba atyala ngokuqhuba umda wokukhawuleza. Ekugqibeleni wagqitywa yi-£ 1,400 kwaye akaqhubekanga ukungahambisani nokuhamba ngeenyanga ze-18.
Imvelaphi kaFabian Delph yiGuyanese. Oku kufana neyo Ruben Loftus-Cheek.
Ngokwenene, uFabian Delph unguyise omangalisayo owaziyo iindlela zokwenza abantwana bakhe bajabule. Ngezantsi umfanekiso okhukhuleyo ubawo nentombi yakhe uAleya.
I-Fabian Delph yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts -Isishwankathelo soLutsha
UDelph waqalisa umsebenzi wakhe ebhola njengowomntwana waseBradford City. UDelph washiya iSixeko ngoSeptemba 2001 ukujoyina iLeeds United emva kokunconywa kumqeqeshi wabo wezemfundo owayenempembelelo enkulu ngokuphathelele ukuncedisa intsapho yaseDelph.
Ukukhula, uFabian waya e-Tong Secondary School, eyashiya kwi-2006. Ngomnyaka kamva, kwakukho ingxaki enkulu yemali kwintsapho yaseDelph ngokubhekiselele kwiimali zokuqhubela phambili izifundo zakhe kunye nokusebenza kwebhola yecala kwi-Leeds United. Le yithuba elithile umama wakhe ongatshatanga wagijima waya kwisilingo sobuqhetseba.
Noko ke, uLucy Delph, waya eLeeds United Academy kwi-scholarship. Wadlala phakathi kwebhola kunye nokubulela kwi-Leeds ye-scholarship. Ngeminyaka eyi-16 Delph igqibile izifundo zakhe kwisikolo somlingane ukuya eLeeds, kwiBoston Spa School.
Emva kokunyuka ngaphezu kweenkundla zakhe zemfundo, uDelph wanikezelwa kwisivumelwano sakhe sokuqala kwi-11 uJanuwari 2008. Ngo-Matshi 2009, imisebenzi yakhe ngexesha le-2008-09 lonyaka lafumana uDelph ukutyunjwa kweLigyeli omnye umdlali wonyaka. Oku kuholele u-Aston Villa ukufuna iinkonzo zakhe. Emva kweminyaka eyi-6, wazifumana edlala e-Manchester City. Ukuphumla, njengoko besithi, ngoku iimbali.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iindaba zeFabian Delph Childhood Indaba kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
UJonjo Shelvey Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali le-Kieran Trippier yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali leChickwell Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts